by URobin Parrish
Yintoni eyenzekayo kwi-galaxy kwiminyaka engama-30 edluleyo?
Iminyaka engama-19 yadlula phakathi kokuphela kwe-prequel trilogy kunye ne-trilogy yokuqala, aka phakathi kokubuyisela kwe-Sith kunye ne -New Hope . Nangona amabali amaninzi avela kuloo minyaka ahlala engabonakaliyo, ezininzi zeencwadi, ii-comic, kunye ne-TV ye- Star Wars Abavukeli , kunye nefilimu i- Rogue One , isinika ingcamango enamandla yokuba ubomi bufana nobani kule minyaka.
Kodwa kuthekani malunga neminyaka emide engama-30 phakathi kwe-trilogy yokuqala kunye ne-Disney entsha?
Ukubuya kweJedi kwakuneminyaka engama-30 edlulileyo ngexesha le -Force Force Awakens , kwaye lixesha elide lide elingabonakaliyo. Ubomi buqhubeka, amandla e-galactic afika kwaye ahambe, iimfazwe zalwa, abaguquli beempawu, abanye bafa, abanye bazalwa ... Kufuneka kubekho amabali amaninzi elindele ukuxelelwa kuloo minyaka.
Ezinye zala mabali zivula iphepha leenveli ezivela kwiincwadi ze-Del Rey, ii-comics ezivela kwi-Marvel, kunye nakwiimidlalo ezithile ze-EA. Yonke into ye-canon, ngoko kwenzeka ntoni xa sidibanisa yonke into ekufuneka ifundwe kulezo zinto zilandelelwano olulodwa?
Kuhamba ngaphandle kokuthetha, kodwa ndiya kuthi njalo: Kukho amaxhoba amakhulu phambi kweencwadi, amahlaya, kunye nemidlalo ebekwe phakathi kweJedi kunye neAwakens - kunye ne -Force Force Awakens ngokwayo. Ndiza kubakhokelela bonke, kwaye ndiya kuqhubeka ndihlaziya eli phepha njengoko amabali amatsha kunye neenkcukacha ziza kukhanya.
Ininzi yale ncwadana ilandela iqela elitsha lama-ragtag amaqhawe amaRebel aholwa nguNorra Wexley .
Ibali labo libonisa ezininzi iinkcukacha ezintsha malunga ne-post-Palpatine galaxy, kwaye elo bali liqhubeka kwiincwadana ezimbini eziseza kuza. Indodana kaNerra uTemmin, ovela kwincwadi, iya kukhula ibe ngumqhubi we-Resistance X-Wing umqhubi ohamba ngegama lakhe lesiteketiso, "Snap" Wexley . Udlala indima exhasekileyo kwi- The Force Awakens , njengoko ichazwe ngumdlali wegreg Greg Greg.
I-Rebel Alliance iseka iRiphabhuliki entsha ukuzalisa amandla okuphela kwe-Empire, igcwaliswe nge-Galactic Senate entsha. Ukushiya i-Coruscant, isixeko saseHanna kwisiplanethi uCandrila kuthiwa yi-capitol entsha ye-galactic. UMon Mothma , umthonyama waseChririla, wenziwa nguKhansela wokuqala weRiphabhlikhi entsha. Isicwangciso sakhe sokuqala sisisiphakamiso sokutshatyalaliswa kweRiphabhlikhi entsha nge-90%, ukukholelwa uxolo kufuneka kube ngumgangatho omtsha karhulumente endaweni yokulwa. Okumangalisayo kukuba, isindululo sidlula, kunye nemali esetyenzisiweyo kwiMpi yoBuvukeli kunokuba ixutywe ekumakheleni imikhosi yehlabathi. Izinto eziseleyo zeMpi yaseRiphabhuliki zishiye kwisikolo esitsha eCandrila - isikolo esithatha indawo ye-Imperial Academy yakudala.
I-Admiral Rae Sloane yoBukhosi (okokuqala yaziswa kwiNcwadana ye- Rebels entsha, i- A Dawn Dawn ) izama ukudibanisa nabanye abadlali bamandla ase-Imperial eplanethi u-Akiva ukucwangcisa ikusasa loBukumkani, kodwa ekugqibeleni uyaphumela kwaye uphonye iplanethi kwiNew Republic . Ubuyela kwaye udibana ne- Admiral engacacanga, engaziwa enecebo lakhe lokwakha uBukhosi obusenyongweni kumdala. Ubume bakhe bokwenene buyimfihlelo ephakathi kwincwadi .
Umbutho onomthunzi obizwa ngokuba ngu- Acolytes we- Overflow, ukuzama ukuqoqa ngasese uSith izinto ezenziwe ngeDarth Vader, kuquka nesibane sakhe esibomvu. (Injongo yabo ifana neyoyiKylo Ren e- The Force Awakens , ene-Vader inyibilikisiwe i-Vader kunye ne-Anabin Skywalker yasekuqaleni ye-lightaber.) Ngaba ngaba ii-Acolytes zibe ngabaphambili kwi-Knights of Ren?)
Ngethuba elithile ngaphambi kokufa kwakhe, uMlawuli uPalpatine wathumela iindwendwe ngaphaya komda we-galaxy, apho ayekholelwa khona ukuba umthombo wamandla akhe amnyama afika. Umntu owayesakuba ngumsizi wakhe ogama lingu Yupe Tashu ufuna ukuba iinkokheli zaseMperial zihambe zifumane abo bahlolisayo baze bafune amandla ommandla omnyama. Ingcamango yakhe idutshulwa phantsi, kodwa le nto "ngaphandle kwethala" into injengeyona enkulu enkulu yokubonakalisa ukulibala.
Kanye emva kokuba iMfazwe yase-Endor, uHan Solo kunye neChebabaa baxhamle kwi-Imperial disarray ukuzama ukukhulula iKashyyyk kwi-Empire's occupation. Iimvakalo zabo ziyakwazi ukudlala kwiNkcazo: Ubomi bentlawulo , kodwa i -Force Awakens: I- Visual Dictionary ibonisa (ngaphandle kweenkcukacha) ukuba iinzame zikaHan kunye ne-Chewie eKashyyyk ziphumelele, kubuyiselwa inkululeko ye-Wookiees.
Ngethuba lesiganeko esingahambelani nayo yonke into enomxholo, umkhwenkethi kwiTatooine ufumanisa iinqwelo ze-Mandalorian ze- Boba Fett ezikhohlakele ngaphakathi kwe-Sandcrawler. Uyekela iinqwelo zakhe aze athi "ungumntu omtsha waseTatooine." Oku kuthetha ukuba uJawas waqokelela izixhobo emva kokufumana indlela yayo ngaphandle kweSarlacc. Kodwa ngaba uSarlacc wahlanza emva kokugaya i-Boba Fett? Okanye ngaba uFott wakhwela waza waphalaza iinqwelo ze-asidi, ekhwela ukuba aphile olunye usuku?
Isibini esitshatileyo sabasweli beRebbel - enye ijoni lonyawo e-Endor kunye nomnye umqhubi ohamba ne- Millennium Falcon ekungeneni kwakhe kwi-Star Star - ngabazali be- Poe Dameron , onomntwana omncinane ngexesha IMfazwe yase-Endor. (Akabonakali kwi-comic.) ULieutenant Shara Bey (umama we-Poe) kwiinkwenkwezo ezine kwaye udibanisa neenhlamvu ezinkulu ze- Star Wars .
UMon Mothma uthumela i- Princess Leia kuNaboo ukuba abuze ukumkanikazi okwangoku ukuba enze uNaboo elinye lamalungu e-Flagship entsha. Uvuyayo uyavuma.
Ukufa kukaPalpatine kubangela into ebizwa ngokuthi "Ukusebenza: iCinder," isaphulo somhlaba esatshitshisiweyo esinezixhobo zokubhubhisa ubuninzi esetyenziswe kwihlabathi ezininzi kwi-galaxy-kuquka nekhaya lakhe laseNaboo.
ULeia, uShara, kunye nendlovukazi yaseNaboo ikwazi ukutshabalalisa izixhobo phambi kokuba iplanethi ingonakaliswe ngokungafanelekanga.
Kamva, uShara uhamba noLuka Skywalker kwi-mission ukuya kwisiseko se-Imperial ukufumana i-Jedi yokulahleka. Umthi oqinileyo wamandla okhulile wawukhulile entliziyweni yeJedi Temple kwiCoruscant, kodwa uPalpatine wawusususile. Onke amasebe aseleyo; ULuka uthatha enye apho eceba ukwakha indlu yakhe entsha yeJedi (kwi Devaron), kwaye uvumele uShara kunye nosapho lwakhe ukuba batyale enye ekhaya labo elitsha.
Iimfazwe zeNkwenkwezi: I-Force ivuse
Njengoko kubonakalisiwe kwaye kwandiswe kwi -Force Awakens , uHan Solo kunye noLeia Organa batshata ngokukhawuleza emva kweMfazwe yase-Endor, kwaye emva koko emva koko, uLeia wakhulelwa unyana wabo, uBen Solo . Ngokutsho kwe -Visual Dictionary , uLeia waba ngu-politician kunye nenkokheli kwi-Republic entsha, kwaye uHan wagcwalisa ixesha lakhe ngokungena kwimidyarho-ininzi yawo eyayinayo.
ULuka wenene wakha i-Jedi Temple / Academy entsha (mhlawumbi kwiDaaron), apho wafundisa khona isizukulwana esitsha seMandla-esebenzayo iindlela zeJedi. Ngexesha elide emva kokuba liqalise ukusebenza, uLeia waphawula ukuba unyana wakhe uBen wayehendelwa ngecala elimnyama, ngenxa yamacandelo omntu ongaqondakali ogama linguSnoke . Wathumela uBen kwisikolo sikaLuka ukuba afumane uqeqesho olufanelekileyo lweJedi kunye nabanye abafundi bakaLuka. Kodwa ngaphambi kokuba nabani na obenako ukufikelela kwisikhundla sikaJedi Knight, uBen waphendukela kwicala elimnyama, wathatha igama elithi Kylo Ren , wabulala bonke abafundi bakaLuka.
ULuka ngokwakhe ngokwakhe wasinda ekuhlaleni kukaRen.
Ukuphazamiseka ngenxa yokuhluleka kwakhe ukunceda umntakwabo, wayezicima, efihla xa ecinga ngasese i-Jedi Temple yeGalaxy. Wayifumana kwihlabathi elibizwa ngokuba yiAkch-To, nangona iinkcukacha zendlela kwaye kutheni zingayi kubonakaliswa kude kube yiNgxenye VIII.
Okwangoku, uKylo Ren wasayina kunye ne-Snoke's First Order kwaye wakhonza njengenkosi ye Knights of Ren. Abazali bakhe, babonakaliswa ngukungcatsha kwakhe, ngamnye waya kwizinto eziqhelanisiweyo zokuphila kwakhe kwangaphambili: ULeia wasungula ukuMelana nokubeka iliso kwizenzo zokuQala kweNkulumbuso, ngoxa uHan wabuyela ekuthungeni imithwalo yempahla kunye ne-Chewbacca. Umtshato wabo awuzange uchitheke, nangona kunjalo, zabo iimvakalelo zazingatshintshi.
Endaweni ethile phakathi kwayo yonke ingxubusho, uRee waziswa kwi-planet Jakku ngumntu okanye abantu awakhumbula nje "njengentsapho yakhe," waza waxelela ukuba ahlale apho ade abuyele.
Iimfazwe zeNkanyezi: Ukuvukela
NgoMlawuli wasweleka kunye neNkwenkwezi yokuFafa, abalawuli beengingqi kwi-galaxy basabela ngeendlela ezahlukeneyo. Urhuluneli u-Adelhard wecandelo le-Anoat ubeka inqabileyo engqonge ummandla wakhe, kwaye uvimba zonke iinkcukacha zonxibelelwano kunye nangaphandle ngelixa ukusasaza imilayezo ephikelela nayiphi na inkulumo yokulwa noBukhosi kwiPropaganda yeRebel. (Phakathi kwamazwe amaninzi, u-Anoat ubalwa no-Hoth noBaspin ngaphakathi kwemida yawo.) Izenzo zika-Adelhard zikhuthaza abahlali becandelo lika-Anoat ukuba baphakamise ngokuchasene naye, bevelise iiseli ezintsha zeRebhabhe ezicatshulwa kuzo zonke i-Republic entsha.
Iimfazwe zeNkanyezi: C-3PO
Ukuza ngo-Matshi 2016.
Emva: Ubomi bentlawulo
Ukuza ngo-2016. Ngokutsho kukaChuck Wendig, iNxalenye yesi-2 ye-trilogy yayo ibizwa ngokuba yi-Wookiee ityala elifunekayo ngu-Chewbacca ukuya ku-Han Solo. Ngokuqinisekileyo, uMatyala oBomi uza kulandela iinjongo zikaHan no-Chewi kwizame zabo zokukhulula iKashyyyk.
Emva: Ukuphela koMkhosi
Ukuza ngo-2016. Ingxenye yesithathu ye-Wendig's trilogy. Isalathiso asiyazi, kodwa isihloko sichaza ukuba singabhala imihla yokugqibela yoBukhosi.
Abathandi ababini-abahlobo-abathandekayo-abadala, uCiena Ree noThane Kyrell, bafumana ngamacala athile achazwe kwimfazwe ebonakalayo kwi-trilogy yokuqala. Incwadi ilandeleka njengoko iphuma ngaphakathi nangaphandle kweefilimu ezintathu kunye nangaphezulu, kwaye kubonakala ngathi isivumelwano sokuthi iLost Stars iyona ndlela ihamba phambili "Uhambo oluya kwi -Force Force Awakens ".
Phantse umnyaka emva kweMfazwe yase-Endor, iMfazwe yaseJakku yenzeke. Uloyiso olugqibeleleyo lweRiphablikhi entsha, njengoko amandla aseMbuso aphelile. Ngebudeni bemfazwe, uCiena uye wavuka waba ngumphathi weenqanawa zakhe-i-Star Destroyer ebizwa ngokuba yi- Inflictor . Xa ibhola liya ngaseningizimu kwiMihlaba, ikhungula iinqanawa, iyigqitheke eYakku. I-Thane igxotha ngaphakathi kwaye igcine ubomi bukaCiena, kodwa ikusasa lakhe njengentolongo yeNtsha yeRiphabliki ishiywe ingagqitywanga.
Inkwenkwezi ye-Star Wars Imfazwe yokulwa: iMfazwe yaseJakku
Le phakheji ye-DLC yamahhala yomdlalo wevidiyo ye-EA ivumela abadlali ukuba bafumane imfazwe engxowankulu, eyona nto ibalulekileyo kwiJakku.
IRiphabhulikhi entsha: Igazi
Ukuza ngo-2016. UClaudia Grey, umbhali weLost Stars , ukhokhe le ngxelo ebeka iminyaka emithandathu phambi kwe -Force Force Awakens . Akukho nto iyaziwa malunga neqhinga layo.
Iqoqo leemveli ezintathu zikaGreg Rucka ezityhila ubomi bukaRey, Finn, kunye nePoe phambi kweThe Force Awakens . (Iinkcukacha zizayo.)
Ngaba ndiphosakele naziphi na iinkcukacha ezibalulekileyo? Ndazise.
Inkwenkwezi yeNkwenkwezi yeGlosari: I-Force
Uhlolo luka-Elstree 1976: Iimpawu ezingaziwayo zeMfazwe yeNkwenkwezi
Yintoni isiNgesi isiNgesi?
I-Sewing Marine Canvas - Ukuphononongwa kweStorit Stitcher
Amazing Grace Iingoma
Iindlela eziphezulu zokuSebenzisa